December, 2019 | Job Vacancy in Myanmar
2019-12-31 18:29:56 , * သငျတနျးစဖှငျ့မညျ့ရကျ5Janua…
* သငျတနျးစဖှငျ့မညျ့ရကျ5January 2020
* သငျတနျးကွေး တဈဘာသာ 40,000 kyats+ စာရှကျ စာတမျးကွေး 25,000 kyats
* စာသငျသကျ 14 နှဈ‌‌ကြျောအ‌‌တှ့အကွုံ ရှိသော ဆရာမ ဒေါဇာခွညျဝငျး ကိုယျတိုငျသငျကွားပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
* Pearson မှ ပွဋ်ဌနျးထားသော Syllabus အပွညျ့အစုံပါသောText book အပွငျ Old Question အပုဒျ 200 ကြျော လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးမှာဖွဈပါတယျ။(3နာရီ မေးခှနျး အစုံ 40 လလေ့ာခှငျ့ ရရှိပါမညျ။)
* ကြောငျးသားဟောငျးမြား သငျတနျးကွးတဝကျပေးသှငျး၍ တကျရောကျနိုငျပါသညျ။
* စာသငျကွးမု့ ပုံစံ(Teaching style )နဲ့ ပါတျသတျပီး အသေးစိတျ သိရှိလိုပါက ဤသငျတနျးကြောငျးတှငျ တကျရောကျပီး Level3Diploma ရယူထားသော အောကျပါ fb အကောငျ့မြားသို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးစုံစမျးနိုငျပါသညျ။( အကောငျ့ name မြားကို Comment တှငျ ဖျောပွပေးထားပါတယျ)
အမှတျ (523)၊ မဓေါဝီလမျးမကွီး(မဓေါဝီဈေး)၊( ဂ )ရပျကှကျ၊မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျ၊ရနျကုနျတိုငျး။
(ခမောသီကားစီး၍ မဓေါဝီလမျးဆုံ မှတျတိုငျတှငျဆငျးပါ)
This entry was posted in Training and Class on 2019-12-31 by admin.
2019-12-31 16:00:22 , LCCI Level 1 &2ကို July , Se…
LCCI Level 1 &2ကို July , September 2020 series ဖွဆေိုလိုသူမြားအတှကျ အတနျးသဈ
* သငျတနျးကွေး 120,000 kyats(6 လအပွတျ)
* December လအတှငျး သငျတနျးအပျနှံပါက 10,000 kyats Discount ရရှိပါမညျ
* တနျးခှဲ တဈခုလြှငျ 15 ယောကျသာ လကျခံသငျကွားမညျဖွဈပါသညျ။
* စာသငျသကျ 14 နှဈ‌‌ကြျောအ‌‌တှ့အကွုံ ရှိသော ဆရာမမြားမှ
* Pearson မှ ပွဋ်ဌနျးထားသော Syllabus အပွညျ့အစုံပါသောText book အပွငျ Old Question အပုဒျ ၁၀၀ ကြျော လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးမှာဖွဈပါတယျ။(3နာရီ မေးခှနျး 25 စုံ လလေ့ာခှငျ့ ရရှိပါမညျ။)
* စာသငျကွးမု့ ပုံစံ(Teaching style )နဲ့ ပါတျသတျပီး အသေးစိတျ သိရှိလိုပါက ဤသငျတနျးကြောငျးတှငျ တကျရောကျပီး Level3Diploma ရယူထားသော fb အကောငျ့မြားသို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးစုံစမျးနိုငျပါသညျ။
(အကောငျ့ name မြားကျု comment တှငျ ဖျောပွထားပါတယျနျော)
အမှတျ 523၊ ( ဂ ) ရပျကှကျ၊ မဓေါဝီဈေးလမျး ( ရှဝေါထှနျးစတိုး) ၊ မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျ၊ရနျကုနျတိုငျး။
2019-12-29 18:32:20 , Plz admin စာရင်းသွင်းပိတ်ရန် …
စာရင်းသွင်းပိတ်ရန်3ရက်သာလိုတော့တယ်နော်
New year Discount အနေနဲ့ တစ်တန်းအပ် 100% Free Extra တစ်တန်းရယူလိုက်ပါ???
English စာဘာသာရပ်ကို အခြေ ခံကစတင်လေ့လာချင်တဲ့သုတွေအတွက် January Sunday သီးသန့်တန်းခွဲသစ်လေးပါပြီနော်❤❤❤
Jan လအတွက် Certificate တန်းခွဲများ
? 12 Jan 2020 (Sun) Time – 8 AM – 10 AM
? 1.5 months( 25,000 Ks)
? 12 Jan 2020 (Sun) Time – 10 AM – 12 PM
?️ 12 Jan 2020 (Sun) Time – 12 PM –2PM
?1.5 months(29,000 Ks)
?️ 12 Jan 2020 (Sun) Time –2PM –4PM
?1.5 months(29,000 Ks))
?️ 12 Jan 2020 (Sun) Time –4PM –6PM
?️ 19 Jan 2020 (Sun) Time –6PM – 8 PM
အောက်ပါ Link တွက်လဲနာမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်
– 09 764158055 – 09 978902345 ကိုဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
(Ocean Center) အနီးအမှတ် – ၆ ၊ ဒုတိယထပ်၊
တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။ရွှေပြည့်စုံ စားသောက်ဆိုင်(အပေါ်ထပ်)၊( ရွှေညောင်ပင် – ဆေးခန်း နှင့်ရွှေညောင်ပင် – ဒံပေါက်ဆိုင် ကြား )
This entry was posted in Training and Class on 2019-12-29 by admin.
စာရင်းသွင်းပိတ်ရန်5ရက်သာလိုတော့တယ်နော်
2019-12-29 18:32:20 , Plz admin English စာဘာသာရပ်ကို…
Plz admin English စာဘာသာရပ်ကို အခြေ ခံကစတင်လေ့လာချင်တဲ့သုတွေအတွက် January Sunday သီးသန့်တန်းခွဲသစ်လေးပါပြီနော်❤❤❤
2019-12-29 18:32:20 , Plz admin မင်္ဂလာပါရှင် တိုးတက…
Plz admin မင်္ဂလာပါရှင် ??
တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ English စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
နှောင့်နေးနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော် မိမိလုပ်ငန်းခွင်မှာ career လုပ်ဖို့ Englishစာကအတားဆီးဖြစ်နေပါသလား
တွေကိုEnglish လို Professional ကျကျရေးတတ်ဖတ်တတ်ပြောတတ်ချင်ပါသလား English စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး communicate အားနည်းနေသူများ
ပညာပါရမီမှာ Certificate In English အတန်းလေးလာရောက် တက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် ♥
?? လူကိုယ်တိုင်လာဖို့မအားတဲ့သူတွေအတွက်?? mobile Banking account & wave money accountလေးတွေကတစ်ဆင့်ငွေလွှဲပေးပြီး Promotion နှင့် Discount အရယူလိုက်ပါနော် ❤❤
Singapore International Certificate​ & Diploma တန်းထိလည်းဆက်တက်​လို့ရပါတယ်နော် ??
❤❤❤အချိန်တိုအတွင်းအထိရောက်ဆုံး သင်ပြပေးသွားမှာမို့ အမြန်ဆုံး လာရောက်အပ်နှံဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ? အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေအကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ပညာပါရမီ နဲ့လက်တွဲကြစို့??
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက☎☎ ==>>09797530707 ,09 797531818 သို့လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်??
2019-12-29 13:59:36 , Plz admin New Year မှာ ဘယ်မှ…
Plz admin ??
New Year မှာ ဘယ်မှာမှ ရှာမရနိုင်တဲ့ Managements ဘာသာရပ်တွေကို ပညာပါရမီမှာ အတန်ဆုံး Discount တွေနဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ?
အထူး သတိပြုရမှာက Special Classes တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းသားဦးရေကန့်သတ်ထားတာတော့သတိပြုရမယ်နော် ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက်အသုံးဝင်ဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံး Managements ဘာသာရပ်တွေကို အခြေ ခံကစတင်လေ့လာချင်တဲ့သူတွေအအတွက် ပညာပါရမီတာမွေမှာ စတင်တက်ရောက်လိုက်ပါ???
2019-12-27 11:48:44 , #ယနေ့ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးအလားအလာ(XAUUS…
အဖွင့်ဈေး – 1512.17
အမြင့်ဆုံးတတ်နိုင်သောဈေး – 1523.59
အနိမ့်ဆုံးကျနိုင်သောဈေး – 1491.45
Buy .1507 ./tp.1509/.Sl.1505
Sell. 1517./tp .1514/.Sl.1520
ယနေ့ Resistance နဲ့ Support တွေကတော့
R1 – 1513.66
R2 – 1517.45
R3 – 1523.59
Pivot Level -1507.52
S1 – 1501.38
S2 – 1497.59
S3 – 1491.45
This entry was posted in Training and Class on 2019-12-27 by admin.
2019-12-26 18:45:45 , စာရင်းအင်းနယ်ပယ်မှ ၀န်ထမ်းများ…
သင်တန်းကာလ – (၂၅.၁.၂၀၂၀ – ၃၁.၁.၂၀၂၀)
? သင်တန်းသားများ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ စိတ်ဝင်တစားသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် Aircon ခန်းထဲတွင် တစ်ဦးချင်း ဂရုတစိုက် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ?
♣ Free WiFi
♣ ကော်ဖီ၊ အအေး
♣ Textbook၊ စာအုပ်၊ ဘောပင်၊ အင်္ကျီများအပြင်
♣ တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရေးရာများကို စိတ်တိုင်းကျ တိုင်ပင်နိုင်ခြင်းနှင့်
♣ သင်တန်းတက်ရောက်သူများကို အလုပ်အကိုင် (အခမဲ့) ရှာဖွေပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ရှိပါတယ်။
၄၀ x ၄၁ ကြား၊ ၆၅ x ၆၆ ကြား၊
This entry was posted in Training and Class on 2019-12-26 by admin.